Bavimbe kwasani abe-IFP kwaMashu | IOL Isolezwe
Bavimbe kwasani abe-IFP kwaMashu
Isolezwe / 26 November 2012, 11:36am /
Imoto yentatheli esale ingamalangabi emgwaqeni ongenela ehostela la Kwa Mashu.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Izimoto ezilinyaziwe zamalungu e NFP abezokhankasa ehostela la Kwa Mashu.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
ZISINDE ngokulambisa izintatheli kushiswa imoto yentatheli nomthwebuli wezithombe kwi-SAPA ebezikuyo ehostela KwaMashu izolo amalungu e-IFP evimbela i-NFP ukuthi ingangeni ukuzokhankasela ukhetho lokuchibiyela oluzokuba ngesonto elizayo.
Athwale kanzima amalungu e-NFP ezama ukungena kuleli hostela njengoba eqale ama ngasekuqaleni kwehostela kungangeneki emuva kokuthi iqulu lamalungu e-IFP ebelimasha, lifake amabhayi ale nhlangano, nezinduku, lisondela ngalapho lingene ngakhona, abesimame bedunusa beqhulula nenhlamba.
Kuthe uma izimoto seziqala zihamba ziyongena kuleli hostela kwaphoqeleka ukuthi zime erenki kwaMazambane, i-IFP ivimbile.
Amaphoyisa abe esema eba ujenga ukuze lamaqembu ahlukane, ngaleso sikhathi abantu be-IFP abanye abebemi eceleni kwemigwaqo ngasemijondolo yabo bebeqhulula abantu be-NFP ngenhlamba bethi bazobasukela endaweni yabo.
I-NFP nayo ibiphendula isho ukuthi izongena kule ndawo angeke kuze kube khona izindawo ezingo-alubhadwa.
Amaphoyisa abe esesondela equlwini le-IFP alixwayisa ukuthi livule indlela.
Le mashi ye-NFP ibe isihlehla ishona emuva kwavuleka isikhathi sokuthi kungene abantu be-NFP, imoto enkulu yamaphoyisa iqale yasusa imigqomo emikhulu ebekuvinjwe ngayo imigwaqo.
Bangenile abantu be-NFP, kuthe ujenge lwezimoto luphakathi nendawo, amanye amaphoyisa ehamba phambili nojenge ezinye izimoto ezimbili zisekugcineni, omunye uvele wagingqela emgwaqeni umgqomo omkhulu obusususiwe emuva kwalokho kwakhona othela uphethiloli kwingqumba kadoti obuchitheke kulo mgqomo.
Ngalesi sikhathi intatheli yaleli phephandaba neye-Daily News, uNksz Mpume Madlala bebesemotweni ebimile eceleni komgwaqo, yentatheli yeSapa uMnuz Joe Stolley ebisayoshutha.
Kuqhamuke omunye wesilisa wabuza ukuthi le moto ngekabani, kwabe sekuqala kuqhamuka amatshe abeqhululwa ngabantu abebecashe ngemijondolo.
Ezinye izimoto ebezilandela ujenge zinamalungu eNFP zishayiwe zalimala.
Intatheli yaleli phephandaba neye-Daily News, ziphumile emotweni, zabaleka sekuqhululwa amatshe kanti akuphelanga sikhathi esingakanani ziphumile emotweni, yabe isivutha amalangabi isiphakathi nomgwaqo.
Amalungu e-NFP ashayelwe izimoto zawo ajike ngaleso sikhathi ahamba.
Amanye abekwazile ukungena ngaphakathi abesemi ngaphesheya ehostela, amalungu e-IFP esegcwele umgwaqo la kufanele aphume ngakhona.
UStolley uthe ngesikhathi eshutha izithombe ubonile kushaywa izimoto ngamatshe, wabe esezwa nokudubula ebekuqhamuka kubantu.
“Ngibalekile ngayocasha kwelinye ibhilidi, ngithe uma ngiqala ngithola izingcingo ziphuma kwabebehleli emotweni ngabuka ngaphesheya, ngabona imoto yami isiphakathi nomgwaqo, kukhona oku-orange ibekuphezu kwayo ngaphambili,” kusho uStolley.
Uthe ubefuna ukuya kuyo imoto kodwa ibhungu ebeliseduze kwakhe lathi angayi ngoba uzobulawa.
Ebuza ishiselweni imoto yakhe ngoba akasiyo i-IFP noma i-NFP kodwa omunye wesimame wathi bayaxolisa.